Genesisi 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mvura yemafashamo inoserera (1-14)
Njiva inotumwa (8-12)
Kubuda muareka (15-19)
Vimbiso yaMwari pamusoro penyika (20-22)
8 Asi Mwari akayeuka Noa nemhuka dzese dzemusango nezvipfuwo zvese zvaaiva nazvo muareka,+ uye Mwari akaita kuti mhepo ivhuvhute panyika, mvura ikabva yatanga kuserera. 2 Zvitubu zvemvura yakadzika nemagedhi emvura ekudenga zvakavharwa, saka mvura yainaya yakagasa.*+ 3 Mvura yaiva panyika yakabva yatanga kuserera zvishoma nezvishoma. Pakazopera mazuva 150, mvura yakanga yadzikira. 4 Mumwedzi wechi7, pazuva rechi17 remwedzi wacho, areka yakagara pamusoro pemakomo eArarati. 5 Uye mvura yakaramba ichiserera zvishoma nezvishoma kusvikira mumwedzi wechi10. Mumwedzi wechi10, pazuva rekutanga remwedzi wacho, misoro yemakomo yakatanga kuoneka.+ 6 Saka pakazopera mazuva 40, Noa akavhura hwindo+ reareka raakanga agadzira 7 uye akabudisa gunguo. Raipota richibhururuka panze rodzoka, kusvikira mvura yaoma panyika. 8 Akazobudisa njiva kuti aone kana mvura yakanga yaserera panyika. 9 Njiva yakashaya pekumhara,* saka yakadzoka kwaari nekuti panyika pakanga pachakazara mvura.+ Saka akabudisa ruoko rwake, akaipinza muareka. 10 Akamirira kwemamwe mazuva 7, ndokuzobudisazve njiva yacho muareka. 11 Njiva yacho payakadzoka kumanheru, akaona kuti yakanga yakaruma shizha remuorivhi rakanga richangobva kutanhwa! Noa akabva aziva kuti mvura yakanga yaserera panyika.+ 12 Akamirira mamwezve mazuva 7. Akabva abudisa njiva yacho, asi haina kuzombodzokazve kwaari. 13 Mugore rechi601,+ mumwedzi wekutanga, pazuva rekutanga remwedzi wacho, mvura yakanga yapwa panyika; uye Noa akabvisa denga reareka akaona kuti pasi pakanga pava kuoma. 14 Mumwedzi wechipiri, pazuva rechi27 remwedzi wacho, nyika yakanga yaoma. 15 Mwari akabva ati kuna Noa: 16 “Buda muareka, iwe, mudzimai wako, vanakomana vako, nemadzimai evanakomana vako.+ 17 Buda nezvisikwa zvese zvipenyu zvenyama+ yemarudzi ese, nezvisikwa zvinobhururuka, nemhuka, nezvipuka zvese zvinokambaira panyika, kuti zvive zvizhinji panyika, zvibereke uye zviwande panyika.”+ 18 Saka Noa akabuda nevanakomana vake,+ mudzimai wake, nemadzimai evanakomana vake. 19 Zvisikwa zvese zvipenyu, zvese zvinokambaira uye zvisikwa zvese zvinobhururuka, zvese zvinofamba panyika, zvakabuda muareka maererano nemarudzi azvo.+ 20 Noa akabva avakira Jehovha atari,+ akatora dzimwe mhuka pamhuka dzese dzakachena, nepazvisikwa zvese zvinobhururuka zvakachena,+ akapisira zvibayiro paatari yacho.+ 21 Uye Jehovha akatanga kunzwa kunhuhwirira kwakanaka.* Saka Jehovha akati mumwoyo make: “Handichazotukizve nyika+ nemhosva yemunhu, nekuti zviri mumwoyo memunhu zvakaipa kubvira achiri mudiki;+ uye handichazoparadzizve zvinhu zvese zvipenyu sezvandakaita.+ 22 Kubvira iye zvino zvichienda mberi, kudyara mbeu nekukohwa, kutonhora nekupisa, zhizha nechando, uye masikati neusiku, hazvisi kuzomira.”+
^ Kana kuti “mvura yaibva kudenga yakamira kunaya.”
^ Kana kuti “pekumhara nemakumbo ayo.”